मनसुनपछि बाढी र हाम्रो चूक- विचार - कान्तिपुर समाचार
सरकार एवं जलवायु परिवर्तन, जोखिम न्युनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूले सुचनाको सही संश्लेषण यथासमय नगर्ने हो भने भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा विपत् झन् बढ्दै जाने निश्चित छ ।
कार्तिक ३, २०७८ जीवनमणि पौडेल
नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गएको असोज २३ मा गत वर्षभन्दा आठ दिन ढिलो गरी पश्चिम नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि विभागले नेपालको पूर्वी भागबाट पनि यस वर्षको मनसुन बाहिरिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भन्ने सूचना निकाल्यो ।
सामाजिक सञ्जालमा एक मित्रले बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको अंकगणितीय प्रस्तुतिसहित अब नेपालबाट यस वर्षका लागि जोखिम सकिएको भन्दै आगामी वर्षका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिए । तर विभागको भविष्यवाणी एक हप्ता पनि टिकेन । गिनिज बुकको रेकर्ड तोडिएझैं भयो, नेपालबाट मनसुनी वर्षा बाहिरिन नपाउँदै भित्रियो ।
फेरि भित्रिएको मनसुनले केही दिनयता नेपालभरि वर्षा गराइरहेको छ । पूर्वभन्दा पश्चिममा वर्षा र क्षति बढी भएका सूचनाहरू आइरहेका छन् । नदीहरूमा बहाव बढेका, बस्तीहरू डुबानमा परेका, मानिसहरू बाढीमा फसेका, भौतिक सम्पत्तिहरू क्षति भएका, धानका पाँजाहरू पानीमाथि तैरिएका, नकाटेको धान बाली जलमग्न भएका फोटाहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । बालीे बिमा गर्ने, खेतमा जमेको पानीलाई निकास दिने, खेतमा खाल्डो खन्ने, धानलाई सुक्खा ठाउँमा राख्ने जस्ता जोखिम न्यूनीकरणका पुँजीवादी बजारमुखी र रैथाने उपायहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । प्राय: किनारमा पर्ने किसान अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको केन्द्रमा छन् । बेलैमा सही सूचना नदिएकामा सरकारप्रति जनता आक्रोशित छन्, सरकारलाई गालीको वर्षा गर्न थालेका छन् । तर यो आक्रोश र गालीले मस्त निदाएको बहाना गरिरहने सरकारको माखो मर्नेवाला छैन ।
सुदूर पश्चिममा अहिले भैरहेको वर्षा धेरै स्थानमा खतराको तहमाथि छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो चौबीस घण्टामा डडेलधुराको साउँखर्क जलाधारमा ३४६.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ, पश्चिम नेपालका विभिन्न जलाधार क्षेत्रमा २११ मिलिमिटरभन्दा माथि वर्षा मापन गरिएको छ । वर्षा अझै केही दिन नरोकिने भविष्यवाणी विभागले गरिसकेको छ । तर हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञानको भविष्यवाणी किन फेल हुँदै छ ? राज्य संयन्त्र कहाँ चुक्दै छ ? जोखिम न्यूनीकरणको पुँजीवादी बजारमुखी उपाय वनपछि फेरि कृषिमा कसरी घुस्तै छ ? यसबारे सोच्नैपर्ने भएको छ ।
पहिलो त, मनसुनसम्बन्धी सूचनाको संश्लेषणमा सरकार चुक्यो । सरकारले एक हप्तापछिको जल तथा मौसम भविष्यवाणी गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेन । भएका प्रविधिलाई पनि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न जानेन वा चाहेन । प्रविधिको अव्यवस्थापन कतिसम्म छ भने गत असारमा मनाङमा आएको बाढी कति मिलिमिटर वर्षाले ल्याएको हो भन्दा सरकारसँग अभिलेखित अंकगणितीय तथ्यांक छैन । स्थानीय बासिन्दाले दिने सूचनालाई फेरि जल तथा मौसम विभाग र त्यसका विज्ञहरू तथ्यांक मान्न तयार छैनन् । आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने क्या गजबको शैली छ हाम्रो †
दोस्रो, हाम्रो जल तथा मौसमको चक्रलाई देशको सीमाले तय गर्दैन, दक्षिण एसियाको मौसमी परिघटनाले निर्माण गर्छ । मौसमविज्ञहरूले मनसुनपछि यो वर्षा हुनुको कारण पनि बंगालको खाडीमा आएको आकस्मिक फेरबदललाई मानेका छन् । त्यसैले मौसमका विषयमा पनि हामीले छिमेकी देशहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्छ । भारत प्रविधिको हिसाबले हामीभन्दा माथि छ । ऊ जल तथा मौसम विज्ञानमा हामीभन्दा बलियो, राम्रो र विकसित प्रविधिहरूले युक्त छ । हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञानको भविष्यवाणी हेर्दा भारतीय प्रविधिद्वारा उत्पादित सूचनासँग जोडिन नेपाल सरकार चुकेकै देखिन्छ । यसले हामीलाई अन्तरदेशीय जल तथा मौसम विज्ञानको संयन्त्र र सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो हुन सके जल तथा मौसममा स्वाभाविक र आकस्मिक रूपमा हुने परिवर्तनबाट आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पक्कै सहयोग पुग्नेछ ।
तेस्रो, हामी संघीयतामा गयौं भन्छौं तर शासकीय संरचना र मानसिकता अझै एकात्मक छ । केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय सरकारी निकायहरू हावी छन् । केन्द्र आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहँदैन । स्थानीय सरकार कर संकलन र ढुंगा–बालुवाको बिक्रीमा चासो राख्छ तर जल तथा मौसमका विषयलाई वास्ता गर्दैन; केन्द्रबाट सूचना लिनमा कान र जनतालाई सूचना दिनमा मुख बन्द गर्छ । अहिलेको वर्षाले जन्माएको क्षति जल तथा मौसमविज्ञ वा जलवायुविज्ञले भनेझैं मनसुनपछि आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएको होइन, यो त राज्य संयन्त्रको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी पनि हो ।
चौथो पक्ष हो— जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर । विश्वमा अहिले बढी उठ्ने गरेको र न्यूनीकरणका लागि कम चासो राखिएको विषय जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूको खासै भूमिका नभए पनि भौगोलिक बनावट, आर्थिक अवस्था, जीविकोपार्जनको शैली आदिका कारण हाम्रो देश अति नै जोखिममा छ । मनसुन बाहिरियो भनेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै हात्तीसुँढे पानी पर्नुमा जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको चक्रमा आएको परिवर्तन नै जिम्मेवार छ । विज्ञान मात्र होइन रैथाने ज्ञान पनि, प्रविधि मात्र होइन रैनाथे सूचकहरू पनि मौसमको भविष्यवाणी गर्ने सवालमा जलवायु परिवर्तनसँग पराजित हुन थालेका छन् ।
अन्त्यमा, सरकार एवं जलवायु परिवर्तन, जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूले सूचनाको सही संश्लेषण यथासमय नगर्ने हो भने भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा विपत् झन् बढ्दै र त्यसले नेपाली समाजमा जोखिम झन् बढाउँदै लैजाने निश्चित छ । अहिलेको जलवायु परिवर्तन, भइरहेका प्रविधि र संयन्त्रलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र संघीयताको मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता अप्ठ्याराहरू झन्झ्न चुलिँदै जानेछन् । त्यसैले सरकारले मौसम भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र ज्ञानको पहिचानसँगै त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । केन्द्रमा भएको मौसम भविष्यवाणी गर्ने संयन्त्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि अन्तरदेशीय जल तथा मौसम विज्ञानको
संयन्त्रको मात्र आवश्यकता छैन, सूचना आदानप्रदानको पनि खाँचो छ । यसतर्फ राज्य संयन्त्र बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ । त्यस्तै, अहिलेको बाढीलाई पाठका रूपमालिएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानलाई मानिसका धारणा बुझ्ने, ज्ञान हासिल गर्ने र स्थानीय तहका अनुकूलनका विषयवस्तुभन्दा बाहिर निस्किएर विपत्लाई पनि जलवायु परिवर्तनको बहससँग जोड्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ २१:१५
'झोलामा अफिस भनेजस्तो अहिले खल्तीमा अवार्ड हुन्छ'
कार्तिक ३, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — गायक एवं संगीतकार सत्यराज आचार्यले कलाकारलाई दिइने अधिकांश पुरस्कारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले साहित्य, संगीतको सिर्जना दुखिया पेसा भएको बताउँदै कलाकारलाई पुरस्कारका नाममा अपमान गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘कलाकारलाई बरु सिरक ओडाइदेउ । जाडोमा ओड्न काम लाग्छ । कुन कलाकार दोसल्ला ओडेर बाहिर हिँडेको छ र !’ उनले धेरैजसो कलाकारहरु रिटायर्ड जीवनपछि आर्थिक रुपमा दयनीय अवस्थामा रहेकाले पनि उनीहरुलाई जीवनयापनमा सहज हुने गरी पुरस्कार दिएमात्र त्यसको अर्थ हुनेमा जोड दिए ।
खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यलाई अर्पण गरेको पद्यश्री साधना सम्मान वितरण समारोहमा बाबुले लेखेको लिखित मन्तव्य पढेपछि आचार्यले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले कलाकारको मृत्युपछि जलाउने दाउराको अभाव हुने र कैयन कलाकारहरु रोयल्टीमा ठगिएको तितो यथार्थ पनि बताए । पुरस्कारमा दिइने रकमले कलाकारको औषधिमुलो, घर भाडाजस्ता कैयन कुरामा सघाउने बताए ।
उनले स्वरसम्राट नारायणगोपाललाई एउटा सम्मान कार्यक्रममा बोलाउँदाको प्रसंग सुनाउँदै भने, नारायणगोपाललाई कसैले भनेछ, 'हामी तपाईंलाई टोकन अफ लभ दिन लागेका छौं । जवाफमा नारायणगोपालले भनेछन्, 'त्यो टोकन अफ लभको २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ, मलाई आउन/जान ट्याक्सी भाडा ५ सय खर्च हुन्छ । मलाई ३ सय घाटा भयो । म आउँदिन भन्नुभाथ्यो रे !'
गायक सत्यराजले आफ्नो परिवारका बाबु र दाजुभाइ गरी ३ जनाले पाएका टोकन अफ लभहरुले एउटा कोठा नै भरिएको बताउँदै वर्षको एकचोटी त्यसको धूलो पुछ्ने बाहेक काम नभएको बताए । 'राजादेखि रंकसम्मले दिएका ती पुरस्कारप्रति आफ्नो सम्मान भए पनि पैसासहितको सम्मानले स्रष्टामा जुन उत्साह थप्छ त्यो टोकन अफ लभले मात्रै थप्दैन,' उनले भने ।
उनले कुनै कर्मचारी सम्मान पाउँदा खुसी हुन्छ कि उसको तलब बढ्दा खुसी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, ‘पक्कै पनि तलब बढ्दा खुसी हुन्छ । धनराशी जब आउँछ, मान्छेको काम गर्ने उर्जा बढेर जान्छ । जबकि यही कुरा टोकन अफ लभले गर्दैन ।’
उनले कैयन संस्थाहरुले दशकौं साधना गरेका कलाकारलाई टोकन अफ लभमात्रै दिन र कार्यक्रमको नाममा आफ्नै प्रचार गर्न उपयोग गरिरहेकोमा खिन्नता प्रकट गरे । आचार्यले स्रष्टालाई सम्मान कार्यक्रममा एकदमै अपमानित गरिएको पनि आफूले देख्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘८०/८५ वर्षको स्रष्टा कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ चासो छैन । ड्यासमा लगेर राखिदिएको छ । ठूलो आवाज आइरहेको हुन्छ । उहाँहरुलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ । थोरै समयका लागि भनिन्छ । तर, संस्थाको स्वार्थ पूरा गरिन्छ ।’ उनले संघसंस्था फलानोलाई सम्मान गरे भनेर आफ्नो मात्रै प्रचार गरिने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘त्यो सम्मान हो कि अपमान ?’ टोकन अफ लभ बनाउने कुरा नगद नै दिए बरु स्रष्टाको गर्जो टर्ने पनि उनले बताए ।
आचार्यले ग्रामी र ओस्कारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा नगद नभए पनि पुरस्कार पछि कलाकारको कमाई दोब्बर हुने वातावरण भए पनि नेपालमा पुरस्कारको गरिमाले कलाकारको भाउ नबढ्ने गरेको बताए । उनले ‘अवार्ड हैन रिवार्ड देउ । अवार्ड दिइने होइन, बाँडिने गरिएको छ ।’ आजकल सम्मान अवार्डमा नजाँदा नै कलाकारले गरिमा कायम राख्न सक्ने बताए । उनले पहिला झोलामा अफिस भनेजस्तो खल्तीमा अवार्ड हुने गरेको बताउँदै कलाकारको साचो सम्मानमा धनराशिसहितको पुरस्कारको भूमिका हुनेमा जोड दिए ।
उनले आफ्नो कुरा कतिलाई तितो लाग्न सक्ने बताउँदै भने, ‘यो पैसामुखी कुरा होइन, बरु हृदयको ज्वालामुखी हो ।’
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ २१:००